Ny tranofiara 'The Spore's' dia mamoaka apokalipsy feno biby goavambe noana ho an'ny nofon'olombelona - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Ny tranofiara 'The Spore's' dia mamoaka apokalipsy feno biby goavambe noana ho an'ny nofon'olombelona
Ny tranofiara 'The Spore's' dia mamoaka apokalipsy feno biby goavambe noana ho an'ny nofon'olombelona
Izany no antony tsy tokony hitrandrahan'ny olombelona any amin'ny Antarctic.
by Trey Hilburn III Septambra 22, 2021 831 hevitra
Lionsgate dia mamoaka karazana apokalypsy vaovao amin'ity volana novambra ity Ny Spora. Azo antoka fa nahita zombie marobe isika, saingy efa nahita biby goavam-be manify sy glopola mihinana olona tato ho ato ve isika? Ny Spore dia toy ny antony marina itandremana ahy foana momba ny fandavahantsika ny Antarctic sy ny tany ambanin'ny tany ao anatiny.
Ny synopsis ho an'ny Ny Spora mandeha toy izao:
Ny fandosirana ny sivilizasiôna ho areti-mandringana dia manimba ny zanak'olombelona. Meadow dia nahazo fisondrotana avy amin'ny olon-tsy fantatra. Rehefa hitany fa voan'ny aretina mahatsiravina ny mpamily dia nitsoaka i Meadow ary nialokaloka tao amin'ny trano kely nilaozana… sa izany? Ny apokalipsy dia nanomboka andro vitsivitsy talohan'izay, rehefa nisy fanairana ratsy, izay efa hatory ela teo ambanin'ny tanimbolin-dranomandry taloha, nofohazin'ny fiakaran'ny hafanana. Ankehitriny, rehefa manandrana miala amin'ny hadalana ny olon-tsy fantatra folo, ny sasany dia tsy maintsy manaiky ilay holatra miovaova miafina ary milaza ireo sisa velona ho remby mangidy.
Ny Spora tonga amin'ny blu-ray, DVD ary VOD manomboka amin'ny 9 Novambra.
Ahoana ny hevitrao? The Spore's monster? Ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.